Olom-pirenena any Antigua sy Barbuda - fianakaviana tena trano
Raha te-ho olom-pirenena amin'ny fahazoana ny zom-pireneny, ilain'ny governemanta ny mpangataka hametraka fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny orinasa voafidy, dia nekena tamin'ny fomba ofisialy, vola mitentina 400,000 dolara, mitentina XNUMX dolara farafahakeliny miaraka amin'ny fandoavana ny saram-panodinana sy ny saram-pahavitrihana ilaina.
Ho an'ny mpangataka tokana, na fianakavian'olona 4 na latsaka
Sarany fanodinana: 30,000 dolara amerikana
Ho an'ny fianakaviana 5 na mihoatra: -
Sarany amin'ny fanodinana: 30,000 dolara amerikana miampy 15,000 dolara amerikana isaky ny miankina amin'ny tsirairay
Roa roa (2) fangatahana avy amin'ny antoko mifandraika dia afaka manao fampiasam-bola iraisana, miaraka amin'ireo mpangataka tsirairay mandany vola kely indrindra amin'ny $ 200,000 $ mba hahafahany manara-dalàna. Ny fiovana sy ny saran'ny fahavitrihana rehetra dia tsy miova.
Ho fanampin'izany, ny mpangataka roa na roa nanatanteraka fifanarahana varotra sy fividianana dia azo ampiharina miaraka ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola raha toa ny mpangataka tsirairay dia manome ny vola kely farany amin'ny US $ 400,000.
Ny fananana fananana mahasoa dia azo avela amin'ny alàlan'ny orinasa tsy mitady tombontsoa raha toa ka namoaka ny fahazoan-dàlana ara-dalàna ho an'ny mpangataka (en) ny orinasa dia natsangana ary tsara toerana mifanaraka amin'ny lalàn'i Antigua sy Barbuda, fa tsy fanilihana. na orin'asa any ivelany ary manolotra porofo tsy azo ovana momba ny fananany mahasoa, izay porofo izay hanamarina izany avy amin'ny Mpikira ny Orinasa.
Raha ny fizotran'ny fangatahana eo ambanin'ity safidy ity dia mahasahana ny fividianana trano sy fivarotana izany, izany dia mety hanitatra ny fotoana ny fizotrany miankina amin'ny fananana nofidina. Tsy azo amidy ny trano sy ny trano raha tsy efa 5 taona aorian'ny fividianana, raha tsy mividy fahazoan-dàlana amin'ny fomba ofisialy amin'ny fananana trano any Antigua sy Barbuda.
Ny fampiharana iray ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny safidy fampiasam-bolan'ny trano dia azo atolotra amin'ny Citizenship by Investment Unit (CIU) rehefa nisy fifanarahana fividianana sy famarotana natao sonia miaraka amin'ny mpamorona tetikasa nekena, izay hiatrika ny fanomezana ny fampiharana ny zom-pirenena.
Aorian'ny fandefasanao ny fangatahana anao dia angatahina handoa ny saram-pahavitrihana ilaina ianao sy ny 10% amin'ny saram-panodinana amin'ny governemanta. Rehefa nahazo taratasy fankatoavana ianao dia angatahina handoa ny fandanjan'ny saram-panjakana fanodinana sy ny vola rehetra noho ny mpamorona eo ambany fifanarahana varotra sy hividianana ny lohateny ho fisoratana anarana amin'ny anaranao ary mamela ny fampiharana ny tena soso-kevitra. fampiasam-bola arakaraka ny torolàlana napetraky ny Vondron'ny olom-pirenena amin'ny Fampiasam-bola (CIU).
Raha vao voaray, ny taratasy fangatahana fisoratana anarana dia havoaka ho an'ny mpangataka voalohany sy ny fianakaviany izay mila alefa any amin'ny biraon'ny pasipaoro miaraka amin'ny fangatahan'izy ireo sy ny antontan-taratasy miaraka.
Ny mpandraharaha / solontena nomenao dia hanoro anao ny daty misy amin'ny;
Tsidiho Antigua sy Barbuda haka ny pasipaoronao ary hanao fianianana na fanamafisana ny tsy fivadihanao
Tsidiho ny masoivoho iray, ny vaomiera ambony na ny Office of Consular any Antigua sy Barbuda mba hanangonana pasipaoronao ary hanao fianianana na koa ny fanamafisana ny maha-izy azy. Rohy amin'ny Masoivoho / Kaomisera ambony / Birao momba ny kaonty izay aseho amin'ny takelaka iray.